Wasiirka Waxbarashada dawlada Puntland oo wali socdaal ku kala bixinaya gobolada Heylaan iyo Sanaag – Puntland Voice
Wasiirka Waxbarashada dawlada Puntland oo wali socdaal ku kala bixinaya gobolada Heylaan iyo Sanaag
December 5, 2012 9:42 am Views: 18
Dhahar(PV):-Wafdi uu hogaaminayo wasiirka waxbasrahada Dowlad Puntland Cabdi faarax Juxa ayaa kormeer ku maraya gobollada Sanaag iyo Haylaan ee Puntland ayaa wali ku jira socdaal uu ku kala bixinayo deegaano hoos taga gobolad Heylaan iyo Sanaag.
Wasiirka oo ay la socdaan saraakiil dhanka waxbarashada ah gaar ahaan agaasimaha Agaasimaha Waaxda Imtixaanaadka Puntland ayaa u kuurgalaya baahiyaha dhanka waxbarashada ee ka jira deegaanada ay boqanayaan.
Degmada Dhahar ee xarunta u ah gobolka Haylaan iyo deegaano hoos taga ayay iminka socdaal ku joogaan halkaasoo ay bulshada iyo maamulada ka jira halkaasi la tashi kala leeyihiin baahiyaha jira oo ay u gudbin lahaayeen xukuumada si wax looga qabto.
Dugsiyada Hoose Dhexe iyo sare ee Magaalad Dhahar ayaa ka mid ah meelaha wasiirku booqday saacadihii ugu danbeeyay waxaana uu maamulka iskuuladaasi ka dhageystay sida ay u socoto waxbarashadu.
Guddoomiyaha gobolka Haylaan ee Puntland Maxamed faarax Cali ayaa ayaa u sheegay wasiirka in degmada Dhahar ay ku yaalaan 11 Dugsi waxbarasho oo ay ka mid yihiin labo dugsi sare 9 dugsi H/Dhexe ialamarkaana ay ka degmadan ka hawlgalaan ilaa 70 macalin oo u qaybsan dugsiyadan oo ay ku jiraan ilaa 30 bare oo ay Wasaaradu gunooyin siiso.
Inta badan madaxda kala duwan ee dowada puntland waxaa ay socod ku tagaan degmooyinka iyo deegaanada puntland si ay ula socdaan waxa looga baahan yahay inay hormarshaan marka la eego wasaradaha kala duwan.